Rooblow raac jidkii Nuur Cadde - (Dhaaley) | KEYDMEDIA ONLINE
Rooblow raac jidkii Nuur Cadde - (Dhaaley)
Rooble ha ku kalsoonaado in doodda isaga iyo kooxda Farmaajo ka dhexeysa ay tahay dood u dhexeysa shacabka iyo koox dhilqayaal siyaasadeed ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Illaa maalintii la magacaabay Rooble waxay dad badan oo inay isaga dhiirrigeliyaan raba dhihi jireen "Nuurcadde oo kale noqo". Tusaalahaas waxaa looga dan leeyahay qaabka uu Nuur (AUN) u wajahay xallinta dhibaatooyinkii berigaas ka jiray Xamar.
Nuur-cadde wuxuu noqday qoor laba garab u dhexeyso– shacab iyo dawlad, halka ay isaga hortiis labada dhinac isku ahaayeen Dab iyo Baasiin. Wuxuuna Nuur beddelay habdhaqankii Raysalwasaarihii isaga ka horreeyay oo ahaa mid u dheganugul amarrada Madaxweynaha, si turid-la'aan ahna u fuliya go'aannada Dawladda oo kuwa dagaal u badnaa.
Rooble waxa uu ku soo beegmay marxalad u eg tii Nuurcadde. Waana sababta ay dadku ugu tirtirsiinayeen inuu tubtii odaygaas qiimaha badnaa qaado, si looga baaqsado dhibaato shacabka Xamar ka soo gaarta damaca Farmaajo ee xukunjacaylka, xoog-sheegadka iyo xikmad-la'aanta ku dhisan.
Sida illaa iyo hadda muuqata, RW Rooble wuxuu si fudud ugu summadoobay inuu yahay nin ay dhegtiisa iyo dhugtiisaba u furan yihiin dhawaaqa Shacabka. Wuxuu maalmahaan wajahayaa dagaal uusan Nuurcadde xitaa soo arag oo u dhexeeya isaga [Rooble] iyo qawlaysato isbahaysatay oo aaminsan in hadduu midkood dhinto ay inta kalena raacayaan.
Meeshaan waxaa iiga muuqata fursad uu Rooble ku riixan doono booska Nuurcadde, oo hadda ka dib Raysalwasaarayaasha imaan doona la dhihi doono "Rooble oo kale noqda". Sababtuna waxay tahay in Nuurcadde xilligiisi ay keliya loolamayeen isaga oo ay la safan yihiin shacabka iyo siyaasiyiinta waxgaradka ah oo qabiil walba leh, iyo Madaxweynaha oo dhinaca kale ka soo jeeda. Ma jirin siyaasiyiin gacan-ku-rimis ah sida Qoorqoor oo laqdabo iyo luggooyo la daba taagan Raysalwasaaraha.
Rooble ha ku kalsoonaado in doodda isaga iyo kooxda Farmaajo ka dhexeysa ay tahay dood u dhexeysa shacabka [oo uu isagu metelayo] iyo koox Dhilqayaal siyaasadeed ah oo dheeraad dhiigmiirada ku ah dawladnimada in laga dejiyana ka dhimanaya.
Waxaan oo gorgortan, dacaayado suuqa la soo galiyo, cadaadis, cabaad iyo dullaaliin la isku soo dirayo ah waxay ka dhigan yihiin xeelado Shaydaan oo dhabbaha saxda ah looga leexinayo mashruuca caddaaladsiinta Ikraam. Haddii uu Rooble ku kadsoomana, wuxuu ogaanayaa in uusan heshiis geline, uu hog aanan laga soo laaban doonin ku dhacay.